अझै कान खोल्ने बेला भएन ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
अझै कान खोल्ने बेला भएन ?
बिबाद गर्ने बानी हामी सबैमा धेरथोर छदैंछ । बिबाद किन , कसरी र कहाँ गर्नेले हाम्रो स्तरलाई निर्धारण गर्ने भएपनि यी तमाम बिषयमा हामी त्यती गम्भीर हुने गर्दैनौं । बिबादको जन्म कसरी भयो ? यस बिषयमा सबैभन्दा बढी जानकारी इतिहासविद् र भाषाविद्ले दिन सक्छन । संसारको राजनैतिक भूगोललाई देश मान्ने हो भने नयाँदेश बन्ने र बिबादित देश मर्ने कारण बिबाद नै हुन । बिबादको सही ब्यवस्थापन गर्ने कलालाई द्वन्द ब्यबस्थापन भन्ने गरिए पनि हाम्रो मुलुकमा द्वन्द ब्यवस्थापननै बिबादमा पर्दै आएको छिपेको छैन ।
अझ भनौं त्यसको भुक्तभोगी ब्यक्ती र समाज तपाँई हाम्रो सामु उपस्थीत नै छ । नेपाल राष्ट्रको जन्म र बिकास नै बिबादबाट भएको तथ्य नेपालको राजनैतिक दर्पण र परिचयबाट राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ । बिबादलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा बहस हाम्रो समाजले कहिल्यै गरेन । त्यसैले भन्न सकिन्छ । बिबाद हाम्रो अक्सिजन हो । हामी बिबाद बिना बाँच्न सक्दैनौं । बिबादले बिबादलाई नै जन्म दिने हुँदा सँधै बिबाद गर्ने बिच हारजीत हुने हुन्छ । जसले बहसलाई झन टाढा बनाउँदछ । ब्याप्त बिबादको बीच हाम्रो देशले सँधै समाधान खोजी रह्यो । जसले बहशलाई झनझन टाढा धकेली रह्यो ।
प्रयाप्त बहस बिना ब्यक्तीबाट गरिने कामले बिबाद निम्त्याउँछ भन्दा बिमती राख्ने मानिस आफै बिबादित हुने कुरै भएन । बिबाद नचाहाँदा नचाहाँदै ब्यक्ती , समाज र राष्ट्रका बिभिन्न सरोकारवालाले खडा गर्ने बिबादलाई फलाउने र फुलाउने काम पत्रकारिताको धर्म हुने भएकोले प्रजातन्त्र प्राप्ती पछिको जननिर्वाचित सरकारले भारतमा गरेको (प्राकृतिक श्रोतको लेनदेनलाई) समझदारीलाई सर्वोच्च अदालतले सन्धि भनिदिँदा खडा भएको बिबादले कालान्तरमा महाकाली सन्धी मार्फत एमाले पार्टी फुटेको आजै झैँ लाग्छ । बिबादलाई बहस मार्फत निकाश दिन नजान्दा बहुमतको सरकार धराषायी भएकोपनि हाम्रै तितो इतिहासले बताईरहँदाझन झन बिबाद जन्मेको देख्ने भुक्तभोगी तपाई हामी नै हो । यी सबै भूमिका बाँध्नुको तात्पर्य हाम्रो मुलुक बिबादको स्वर्ग हो ।यो मुलुकमा उत्पन्न हुने बिबादको बिषयबस्तुको मौलिकपन आफ्नै किसिमका छन । बिबाद उत्पन्न हुने कारण नेपालीनै हुन , उत्पन्न गराउने चाहे बिदेशी दानापानी खाने नेपाली हुन कि स्वम्ं बिदेशी ।
चाहे रामायण कालिन बिबाद हुन कि महाभारत कालिन बिबाद । दुबै बिबादमा दुखपाउने नारीनै थिए । रामायणमा सीताको रुपलाई बिबादित बनाउने रावण थिए भने चरित्रलाई बिबादित बनाउने धोबी । दुबै बिबादको जड थिए पुरुष । सजाय पाउने नारी । महाभारतमा द्रौपदीलाई जुवामा दाउ लगाउने युधिष्टिर हुन कि सारी तान्ने दुष्शासन । बिबाद खडागर्ने कौरब र पाण्डब हुन । सजाय पाउने द्रौपदी (नारी) । हरेक बिबादले निम्त्याउने पिडाका पिडितहरुले बहशको मौकासमेत नदिने त्रेतायुग होस कि द्वापरयुग ।
अलीकती हिम्मत गर्दै द्रौपदीले भिष्मलाई एकाध सवाल गर्दै के श्रीमती श्रीमानको सम्पती हो ? हो भने श्रीमान नै पराजीत भएपछी श्रीमती स्वतः पराजीत भैहाल्छिन हैन भने आफै पराजीत श्रीमानले कसरी श्रीमतीलाई जुवामा हार्न सक्छ ? भन्दै बह्शको निम्ती भिष्मलाई पुकारेकी हुन । भिष्मकालिन समाजमा पनि पिडितले न्याय नपाएको दृष्टान्तले हाम्रो समाजको वर्तमान स्थीती सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । परिवर्तनको नाममा क्षमता भन्दाबढी भारी बोकेकी सभामुख हुन कि हाइलेबल भेटघाटमा बस्न र प्रस्तुत हुन नजान्ने फस्टलेडीको गतीबिधी बिबादित बन्नु आफैमा स्वभाबिक झै लाग्दछ । यहाँ को, कसरी प्रस्तुत हुने ? कसरी बिषयबस्तुलाई डिल गर्ने ? कुरासंग यो लेखमा सिकाउने जमर्को मबाट कदापी हुने छैन । कसले कहाँ कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने उसको नितान्त निजीकुरा भएपनि देशको ईज्जत जोडिएपछी ईज्जत जोगाउने जिम्मा लिएकाहरुको कामको बारेमा बिबाद गर्नु बाध्यता हुन आउँछ ।
राणा परिवार भित्रको बिबादले राणाहरुलाई बर्गिकरण गरिएकोले बिबादित सि ग्रेडका पढे लेखेका राणा र राणापरिवार भित्र काम गर्ने चाकरबाजका पढे लेखेका सन्तानहरुले आफ्नो स्वार्थको लागी प्रजातन्त्रको आवरणमा खेलिएको बिबादित राजनैतिक घटनाले नेपाल बिबादित राष्ट्रहरुको क्रीडास्थल बन्नगएको ईतिहासले बयान गर्दछ ।
सबै बिबादलाई समाप्त पार्दै समुनन्त समाज निर्माण गर्न, बिकासको मार्गमा अग्रसर हुने बाचाका साथ गरिएको ०६२ र०६३ को परिवर्तनलाई पनि अदुरदर्शी नेताको आन्तरिक बिबादले देश भिमकाय बिबादमा फसेको र अझ फसिरहने अन्तरबस्तु बिबादित संबिधानमा समाबेश हुनु हाम्रो दुर्गतीको कारण बन्नजाने निश्चितनै छ । एउटा हिन्दूले गरेको गल्ती हिन्दूधर्मले , एउटा क्षेत्रीले गरेको गल्ती पुरै क्षेत्री समुदायले अनि एउटा राजाले गरेको गल्तीको सजाय पुरै राजतन्त्रले भोग्नुपर्ने मान्यता स्थापित गर्दै गरिएको परिवर्तनले अँगालेको बिषयबस्तु गणतन्त्र ,संघियता र धर्मनिरपेक्षताले निर्माण गर्ने समाज झन बिबादित हुने, अरु बिभाजीतहुने प्रमाणित हुँदैछ । बिदेशीको रणनीतिक चालका दुईचार राजनैतिक औजारलाई अझ स्वीकार गर्नु भनेको सग्लो नेपाललाई बिदा गर्न तयार हुनु नै हो ।
करीब दश बर्षे बेल्जियम बसाईको सुरु सुरुमा यो पङ्तीकारको मन यसरी बिबादित थियो कि बेल्जियमको हरेक सडकको नाम दुईवटा भाषामा देखेर । भाषा अध्ययनको सिलसिलामा बेल्जियमकै भाषा शिक्षकसंग मेरो निर्दोष प्रश्न यस प्रकारको थियो । फ्रान्सको आफ्नै भाषा , हल्यान्डको आफ्नै अनि जर्मनको पनि । बेल्जियमको भाषा चै के नि ? किन सडकको नाम बिदेशी भाषामा लेखेको ? मेरा फ्रेन्चभाषी शिक्षक हाँसेर जवाफ दिन्थे, फ्रेन्च , डच र जर्मनहरु को त एउटा भाषा छ । हामी बेल्जियम बाशीको तीनतीन वटा । हाम्रा सडकले दुई भाषामा नाम पाउँनु आफैमा गर्वको कुरा हो । जर्मनहरुको मात्र जर्मन , हल्याण्ड बाशीको डचमात्र अनि फ्रेन्च बाशीको फ्रेन्चमात्र ।
हाम्रो त फ्रेन्च , डच र जर्मन (डोयच) अनि हामी भाषामा धनी कि ती मुलुक रु आज नेपालमा नेपालीहरुको हालत त्यही बेल्जियमको जस्तै हुँदैछ । स्थापित एउटामात्र राजा हुने परम्परा हटाउँदै भारत भक्त अनेक राजा बनाउँने ,एउटै धर्म हिन्दूलाई हटाउँदै इसार्इ करणको उर्बर भूमी बनाउँने , एउटै राष्ट्रभाषा नेपालीलाई बिबादित बनाउँदै हिन्दी र अँग्रेजीको बोलवाला बनाउने साराखेल देख्दा बेल्जियम जस्तो मुलुकले धान्न नसकेको भाषा बिबाद नेपाल भित्र्याईनु देशलाई असफल बनाउने र मुलुक बिभाजीत गर्ने दुरगामी योजना होईन भन्ने आधार के ? नेपाली नेताको चेतना स्तर बडो बिचित्रको छ ।
केहि समय पहिला फ्रेन्च भाषी राजा फिलिपलाई डचभाषी बेल्जियम बाशीले हाम्रो भाषा नजान्ने र नबोल्नेलाई हामी राजा मान्दैनौ भन्दा राजाले बाध्य हुँदै डच भाषा सिक्न स्कुल गएको देख्दा आज आफ्नै मुलुकको संसदमा अंगिकृतले हिन्दीमा संबोधन गरेको देख्दा नेपालको अस्तित्व मेट्ने अन्तिम तयारी नेपाली भाषामाथी प्रहार हो । हिजो संबिधान सभामा राष्ट्रीयगान र नेपाली झण्डा फेर्नुपर्छ भन्ने आबाज बोक्नेहरुको जीत कसरी स्थापित गरिदैछ । सचेत नहुने होभने यही भाषा बिबादनै नेपाल समाप्त हुने अर्को कारण बन्नेमा पङ्तीकार बिश्वस्त छ ।
अन्तमा, बिकशित राष्ट्रमा बिबादको समाधान जनमतसंग्रह मार्फत गर्ने अभ्यास लाई एकदलिय राजतन्त्रले अभ्यास गरेको देख्ने हाम्रा अलोकतान्त्रीक नेताहरुले लोकतन्त्रको नाममा समेत सोही अभ्यासलाई प्रयोगमा लिन नसक्नाले जन्म भएको अनेक बिबादहरु यसरि सवाल बनेर उब्जेका छन हाम्रासामु । नेपाल किन बिबादको स्वर्गस्थल भयो ? नेपालको राजनीतिलाई कसले बिबादित बनायो ? नेपालका स्थापित मान्यता भत्काउन को को कहाँ कहाँबाट परिचालित भए ? देशलाई एक सुत्रमा बाँध्ने मानाङ्क कसले ध्वस्त पारे ? देश बिकासको दिगो मोडेल के हो ? यसका अबरोधक तत्व के के हुन ? राजसंस्था, हिन्दूधर्म र नेपालीभाषाले कसकसलाई असर गर्यो ? नेपालको बिकास कसले रोक्यो ? भूगोल र राजनीतिमा भारत किन यती हाबी भयो ? यी तमाम सवालमा अझैपनि बिबाद गरी रहने हो भने नेपाल मृत राष्ट्र हुन केही समयमात्र लाग्नेछ ।
समय छदै तमाम बिबादित सवालहरु माथी बहस प्रारम्भ गर्ने हो भने हामी कही न कहीबाट मुहानमा पुग्न सफल हुनेछौं साथै सम्बृद्ध र समुनन्त नेपाल निर्माण गर्ने आधार पहिल्याउने छौ । यी सबै बहशमा केवल राष्ट्रभक्त र बिकासबादी नेपालीमात्रको सहभागिता हुनुपर्नेछ । अन्यथा यही बहशनै बिबादको चुरो हुँदै कहीँकतै निर्माण भैसकेको नक्साको बिमोचन गर्ने कारण बन्नेछ ।